Umhla My Pet » 3 Tips Ukuze Dating Ngexesha Exam Ixesha
Yilaa xesha lonyaka kwakhona. ixesha Exam iye snuck phezu kwakho kwaye sele waba Brisbane yobukho bakho. Abaninzi zonke-nighters, iintsuku yoxinezeleko iiyure cramming oko ubomi benu njengomfundi ibandakanya. Sele wahamba ngeenxa ekhampasini wayeziva ngathi ndaba Apocalypse zombie- yiloo nto ukunqongophala ebuthongweni kunye libanda yekofu neelekese ntoni umfundi avareji.
Omnye umphumela kwexesha leemviwo kukuba sonke sikhe wagxininisa kwenyeindawo nise phezu kwabantu ekufutshane kuthi. Oku akuthethi iindaba ezilungileyo ubomi bakho ukuthandana. Mhlawumbi uziva ngathi aninabo ubomi ekuhlaleni ukuba umdlalo wakho uza esinkini. Ukuba waqonda ukuba kanti, uyeva ukuba.
ngethamsanqa, akuyomfuneko ukuba ukhathazeke. ezi 3 amacebo kunokukunceda ACE iimviwo zakho ngoxa kugcinwa uphawu eliphezulu ebomini bakho ukuthandana.
Cinga ndimathidala umtsalane yakho.
ixesha Exam lixesha elibalulekileyo kwikhondo lakho esikolweni, ngoko ukuze abe ngumbono smart ukupholisa phezu imihla. Kuba ufuna ukwenza kakuhle kwiimviwo zakho, akufuni esichengeni ngokuthi aphoswe ngexesha elixabisekileyo zokufunda ngenxa isibini kwemihla. Ngeli thuba ukufunda olunzulu ifomula yenzululwazi kunye neemeko zoshishino, ukufunda ukujika indlela okwexeshana phantsi umtsalane yakho iya kuba luncedo kuwe neqabane lakho.
Umncono nje kubaluleke caffeine.
Red Bull, i-ice cream, iitshiphusi ikofu kubonakala ukuphuhlisa kwinqanaba eliphezulu yokubaluleka ngexesha leemviwo. nokuba, abayi kuba luncedo xa kuziwa ukuba uthandane, ngoko ke imali leyo umhlobo wakho entsha eyona. Ku nga uya kwenza nayiphi okulungileyo xa ufunda imini yonke, ubusuku bonke, soze ubone ilanga kwaye uthatha nawaphi na ikhefu. Makubekho ulungelelwano phakathi ukufunda kwaye leti kubalulekile kwaye sele uzibonisile ukuba ukuphucula bakho ubuchule ukufunda kunye nokusebenza leemviwo.
Isilinganisi ngexesha lokuba siphumle, istres, kwaye sinandipha kwezinye ilanga ngundoqo. Ezi lekhefu zokufunda zibe ngamathuba amahle ukuba bachithe ixesha kunye nabo ubathandayo. Cinga ukuba ubusuku bhanyabhanya bonke badla okanye ukubukela bonisa TV kunye.
Kungenjalo, ziphume phandle nokuba esebenzayo ngumsebenzi nisondelelane olungileyo, kwakunye inzuzo kwimpilo yakho ngokubanzi- njengoko ukutya yakho ibandakanya iswekile kunye caffeine. Yiya iihambo elifutshane phakathi kweeseshoni cramming kwaye ive- malunga uxinzelelo lobomi emfundo ephakamileyo. nempepho uya ukugcina ingqondo yakho ibe.
Ukuba ubomi bayo mfutshane chats phezu Skype, bencokola ifowuni nje ukuva ilizwi labo, emva kwexesha iiseshoni ubabonise ebusuku okanye ubuthongo-owuva, qinisekisa ukuba kubekho ulungelelwano phakathi komsebenzi kunye nokudlala.
Lo mntu intle self-explanatory. Musa ukulibala ukubhiyozela zakuba nje woyisa iimviwo zakho! Cwangcisa lokudlala ukuba nobabini onokuyenza ukubhiyozela uloyiso unyikimisa zonke iimviwo zakho ukuba bavuselele indibaniselwano yakho. Ukuba kukho Beaver uzimisele nesicwangciso into kwangaphambili oko kuya kukunika into khangela phambili.
ezi 3 iingcebiso ziya kukunceda ugcine i umlilo ebomini bakho uthando ngethuba leemviwo bamelane. Xa sifunda ezi zisukuzana ulwazi kunye nezifundo zakho ezininzi, uya kukwazi saphumelela iimviwo zakho kwakunye ebomini bakho ukuthandana.